Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo kubantwana - iinjongo eziphambili
Ukukhetha izicathulo zabantwana kaninzi kubeka abazali ekufeni. Yintoni ekufuneka ihlawule ngakumbi? Omnye ukhetha izinto zendalo. Amanye amama kunye nabagadi kwindawo yokuqala bafaka kuphela ukusetyenziswa kwendlela yokusebenza kunye nokulingana nobukhulu. Ngaba kukho "igolide" kuthetha ntoni? Ziziphi iindlela eziphambili zokukhetha izicathulo zabantwana?
Iimpawu zokuqala zokukhetha izicathulo zabantwana
Iingcali zomlomo zithi akukho nto inzima ukukhetha isicathulo somntwana. Into ephambili kukukhokelwa ngumgaqo wokuphakama ophezulu kunye nokulula. Ingcinga efanelekileyo yokuhamba kunye kunye nomntwana, kuba unyawo lomntu ngamnye linye. Indlela enjalo iya kuvumela ukufumana imodeli efanelekileyo, ehambelana nayo:
Awudingi ukuthenga umzekelo ubuncinane obukhulu obukhulu. Namhlanje akusiyo ixesha apho kufuneka umele iiyure kwikhilomitha yokuthenga izicathulo zabantwana. Ukuba umkhiqizo mkhulu, akukhuthazwa ukuwugqoka. Unyawo ongekho ubungakanani beesanti elikhulu alinakuqhelaniswa ngokuqhelekileyo. Umlenze uya kuxhoma kwaye uslayidile, okwenza umntwana angakhathazeki.
Kubaluleke kakhulu ukuyeka ukuthenga izicathulo zabantwana kwakhona. Akunakwenzeka ukubiza ukuhluka okunjalo. Ezi ndlela ziza kufaka iminwe, zihluthe kwaye zidale ukungathandeki kwizithende ezintle. Ukukhetha izicathulo zezingane, kufuneka ufumane ubungakanani obukhulu. Oku kubonwa njengomveliso apho phakathi kwempumlo neminwe kuhleli malunga ne-15 mm. Ukuba ngaba izicathulo zasebusika, ngokokufumaneka kweendawo ezikhululekile kuya kudala uhlobo oluthile locingo. Ukuba lo ngumzekelo wehlobo, inkululeko yezicathulo iya kunika induduzo, kuba isitofu sinokuthi siyathukuthela. Ukongeza, ezi 15 mm zivumela ukuba ugqoke izihlangu ezininzi, kuba umlenze wengane ukhula rhoqo.
Izinto ezisemgangathweni - isiqinisekiso sokuthuthuzela nokukhuselwa
Esinye isibonakaliso esibalulekileyo sokuba oozinzi bezilwanyana bacebisa ukuba baqwalasele xa ukhetha izicathulo zomntwana kukubaluleka kwezixhobo ezisetyenziselwa ukudala imodeli. Kunconywa ukubheja kwiindwangu zendalo okanye iinkqubo zokwenza izinto ezinobungakanani bemvelo eziye zagqithisa inkqubo yokuqinisekisa. Izinto zokubala zibonelela:
Ukugcina izinga lokushisa rhoqo ngaphakathi kwezihlangu;
Ukongeza, ezi zinto zinika "umoya" wesikhumba senyawo. Siyabulela kule nto, imilenze ayiyikukhupha kwaye ayiyi kubanda. Phakathi kwabaninzi abavelisi banamhlanje, akusiyo yonke imveliso eyenza izicathulo zabantwana ezenziwe ngezinto eziphathekayo. Uluhlu olulungileyo lwemodeli lumelelwe yirhwebo evela eRashiya. Umvelisi wekhaya uhlinzeka ngamantombazana aqaqambileyo, amabhuthi asebenzayo ekusebenzeni kwangoku, ama-snowboots e-EBO and warm boots. Ngokomzekelo, i-dummies yasebusika i-LUMI idalwe kwizinto eziphathekayo zonyango olulodwa kunye nokunyanzelwa kwamanzi. Ngexesha elifanayo, umbala weentlobo zeempawu ukhangeleka ngokungafani kunye nombala.
Ukuba izixhobo zangaphandle azivumeli ukungena kokungcolisa ngaphakathi kwesihlangu, ukushisa kunikezelwa yesikhombisi kunye ne-inner trim eyenziwe ngoboya. Yingakho i-pedicel ngexesha lokuhamba kwebusika ngokuqinisekileyo liya kubafudumala kwaye ihlaziyeke. I-sole iyakufanelekela ingqwalasela eyodwa. Akukho ntsalela yeglue kuyo kwaye akukho mnye umgca. Le yedwa iya kuhlala ixesha elide kakhulu.
Ukufumana umlinganiselo okhokelayo xa ukhetha izicathulo zomntwana
Induduzo, ukulungeleka kunye nokukhusela akulona nto inzwakalayo kubazali abanenkathalo bakhetha izicathulo zomntwana wabo. Ngandlela-thile iinduduzo zinikezelwa ngokulungiswa kakuhle kweenyawo kumzekelo okhethiweyo. Imodeli nganye yomntwana kufuneka ixhotywe ngezinto ezinokumgangatho ophezulu kunye nokulungelelanisa. Isisombululo esiphezulu siya kuba ngumbane kunye neVelcro. Ukuba ezi zizinto eziqhelekileyo, zimele zisebenze: kulula ukuzinqanda nokuzibophelela.
Abazali abakhetha izicathulo nge-velcro mabayikhumbule: ayinqabile kancinci, kodwa ukhetho olungcono kakhulu. I-Velcro iya kukuvumela ukuba ufundise umntwana wakho ukuba azimelele, kuba ngoku unako ukuqokelela ukuhamba ngaphandle koluncedo lwabantu abadala. Uphawu lwasekhaya laseMordman, lwaze lwaphakamisa abantwana kunye neVelcro kunye ne-zippers ezimbini. Banikezela ngolo thuzelo olukhulu kunye nokulula kwabo bobabini kunye nabazali. Ngoku zonke iingxaki ngokukhutshwa kwezicathulo emva kokuhamba kwexesha elide lasebusika kwixesha elidlulileyo. Inkcazo yazo zonke iinkqubo ezingentla apha xa ukhetha izicathulo zabantwana ziza kwenza ukuthenga okuya kuqinisekisa impilo kunye nentuthuzelo yengane yakho.
Iibhuthi ezinomgangatho ophezulu
Iintlobo zangempela kwihlabathi lezihlangu zabesetyhini
Ihagi nge ham
Piadina kunye namazambane, ithanga kunye ne-ricotta
I-Mite iluma: iziphumo kunye neempawu
Luhlobo luni lwekethi lokukhetha umntwana?
Ubuhle-izandi ezintsha zikaNovemba kwinyameko yezinyawo
Abafazi abaphezulu aba-7, abaye bawashiya amadoda abo awaziwayo: njani amafesti abo awakhiwe ngayo
Indlela yokufunda ukuhamba ngezithende?
Umntwana osemlonyeni: indlela yokuyifumana ngayo?
Iipancakes zokutya kwasekuseni
Ucinga ukuba lo mkhumbi wasetyenziselwa ntoni? Impendulo iya kukumangazela kwaye ikuhlekise
Izidlo ezintathu zezona zizwe ezifanelekileyo
Ungayifaka njani indoda ukuba iqhube i-cunnilingus?